The Spears & Munsil High Definition Benchmark Blu-Ray ဒုတိယထုတ်ဝေ - MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်
ပင်မစာမျက်နှာ The Spears & Munsil High Definition Benchmark Blu-Ray Second Edition
မူလစျေးနှုန်း $29.95 - မူလစျေးနှုန်း $29.95
သင်သည်အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံ၌အတွေ့အကြုံရှိသူသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သောစံကိုက်ညှိသူဖြစ်ပါစေသင်၏ HDTV ကို Spears နှင့် Munsil HD Benchmark တွင်ချိန်ညှိရန်နှင့်ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည့်စမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခင် HD Benchmark ကို New York Times, Widescreen Review, Home Theater မဂ္ဂဇင်းနှင့်အခြားပုံနှိပ်နှင့်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုများမှအကြံပြုခဲ့သည်။ ယခုထုတ်ဝေမှုအသစ်သည်ယခင် disc ၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားပြီး၊
• 3D stereoscopic စံကိုက်ညှိခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းပုံစံများ
•စပီကာတပ်ဆင်ခြင်း၊ စံကိုက်ညှိခြင်းနှင့် A / V ထပ်တူပြုခြင်းအတွက်အသံစစ်ဆေးမှု
• 120Hz နှင့် 240Hz interpolation mode ကိုအကဲဖြတ်ရန် Motion ပုံစံများ
The Spears and Munsil HD Benchmark သည်သင်၏စံကိုက်ညှိတပ်ဆင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံစံတိုင်းကို Spears နှင့် Munsil ၏အထူးသီးသန့်အလွန်မြင့်မားသောတိကျသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ဖန်တီးခဲ့ပြီးဗွီဒီယိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းတွင်အနုပညာအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
3D ပုံစံအားလုံးသည် 3D Blu-ray Disc player နှင့် 3D ရုပ်မြင်သံကြားလိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ 2D ပစ္စည်းသည်မည်သည့် Blu-Ray Disc player တွင်မဆိုကစားနိုင်သည်။
5.06ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အလွန်အသုံးဝင်သော BD
လမ်းညွှန်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ အသုံးဝင်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ။
သုံးသပ်ချက်များသည် လွဲမှားနေပါသည်၊ ၎င်းတို့စကားကို နားမထောင်သည့်အတွက် ဝမ်းသာပါသည်။
စစ်ဆေးမှုများကို မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန် လုံလောက်သော လမ်းညွှန်ချက်မရှိဟု ကျွန်ုပ်ဖတ်ရသည့် သုံးသပ်ချက်များစွာကို စောဒကတက်မိသော်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကို သိသောကြောင့် အခွင့်အရေးယူမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ လမ်းညွှန်ချက်များသည် disc နှင့်အတူပါရှိသောစာအုပ်ငယ်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်မှာ အဆင့်များကို လိုက်နာပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သင့်တွင် ကောင်းမွန်သော ချိန်ညှိထားသော TV ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို အမှန်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေသော ချိန်ညှိမှုများမပြုလုပ်မီ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ထားသည့်4မီတာအကွာအဝေးရှိ LX1 ဘက်လိုက်မီးများကိုလည်း ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများလည်း မရှိသောကြောင့် မကြိုးစားဘဲ စမ်းသပ်မှုများစွာရှိပါသည်။ ဒါကို သင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် THX ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်၊ Blu-Ray အစီအစဥ်အချို့နဲ့ ပါ၀င်တဲ့ THX ဗားရှင်းကို အသုံးပြုပြီး ဒါက ပိုအသေးစိတ်ပါ။ ၎င်းတွင် 3D နှင့် အသံအတွက် စမ်းသပ်မှုများအပြင် ထုတ်ကုန်အချောထည်ကို နမူနာယူရန် ဗီဒီယိုများလည်း ပါဝင်ပါသည်။
Un peu difficile à utiliser mais une fois le fonctionnent compris, c'est le အပေါ်ဆုံး!
အမှတ်တံဆိပ်ဓာတ်ပြား .... မြတ်သော
အလွန်ကောင်းမွန်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ တီဗီအသစ်… ချိန်ညှိချက်များကိုပိတ်ထားသည်… .. calibration disc ကို သုံး၍ ဤပြောင်းထားသောပုံအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသည်။ ဓာတ်ပြားအလွန်မြန်သည်။
DVD နှင့် Customer ၀ န်ဆောင်မှုအထူးကောင်းမွန်သည်
ကျွန်ုပ်၏အလုံးစုံအတွေ့အကြုံသည်ထူးချွန်သည်။ ငါပြသနာတစ်ခုရှိတယ်၊ medialight ကိုခေါ်တယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုကူညီဖို့အပေါ်နဲ့အထက်ကိုသွားခဲ့တယ်။ သူတို့ဆီကအမိန့်ကိုနှလုံးခုန်သံနဲ့ထပ်ပြောမယ်။ ကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်ထူးချွန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု!